सरकारको कमजोरीका कारण पुरुषहरुले आत्मग्लानी गर्नुपर्ने अवस्था छ : नेता सापकोटा
पछिल्लो समय सरकारको आलोचना बढेको छ । सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मात्र होइन, राजपा र अन्य दलका नेताहरुले पनि आक्रोष पोखिरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको विषयले झन विवाद बढिरहेको छ । समसामियक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर ऋषि धमलाले नेकपाका नेता अग्नी सापकोटासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अग्नी सापकोटा, नेता, नेकपा
सरकारको कामबारे भएको विरोधलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्षी दलले आफ्नो राजनीतिक धर्म पूरा गर्नका लागि विरोध गरिरहन्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको होइन, ऐतिहासि महत्वका काम पनि गरेको छ । तर जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा कमजोरी भएकै हो । तर केही पनि काम गर्नै सकेन भन्ने कुरा चाँही आरोप मात्रै हो ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या र बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई किन कारबाही हुन सकेन ? दोषी पत्ता लागाउन सकेन नि सरकारले ?
निर्मलाको बलात्कार र हत्या धेरै ठूलो प्रतिनिधी घटनाको रुपमा अगाडि आयो । घटनाबारेको प्रमाण सबै नष्ट गरेको कुरा मात्रै आउँछ । अपराधी पत्ता नलाग्दा राष्ट्रिय पीडाको रुपमा देखिएको छ । पुरुषहरुले आत्मग्लानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेकपाले यो घटनालाई कसरी लिएको छ ?
पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुमा सरकारले जस्तोसुकै कठिन कदम चाल्नुपरे पनि सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्छ कुरा उठाएका छौँ । उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जितेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
समग्रमा सरकारको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारले अरु त धेरै काम गरेको छ । सात समुद्रसँग पहुँच पुर्याउने काम भएको छ । तर अब सरकारले तत्कालिन, अल्पकालिन, दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनताको समस्या सम्बोधन गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । समय घर्किसकेको छैन । अहिलेसम्मको कामको गम्भीर समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनसाय कस्तो पाउनुहुन्छ ?
उहाँलाई पनि चिन्ता होला । भेटघाट हुँदा सुक्ष्म अध्ययन गरेको पाएको छु । अमेरिकाबाट फर्किएपछि गम्भीर ढंगले काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । समिक्षा गरेर अगाडि जाने हो भने पहलकदमी लिन सकिन्छ । जनताको विश्वास लिन सकियो भने काम गर्न पनि सहज हुन्छ । सुनकाण्ड लगायत विभिन्न विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ ।